HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းနဲ့ အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ? – MyStyle Myanmar
HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းနဲ့ အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ?
HUAWEI က လက်ရှိရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပြီးတော့ အထူးသဖြင့် Mid Range စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ကင်မရာ (၄) လုံးပါဝင်တဲ့ တစ်ခုထဲသော စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။
အခု HUAWEI ရဲ့ nova 2i စမတ်ဖုန်းကို သုံးပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောသွားပေးမယ်နော်။ HUAWEI nova 2i ဖုန်းကို ဝယ်ထားပြီးတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ထားရင် အကျိုးရှိမှာနော်။
Wide Aperture Effects ကို အသုံးပြုပါ
HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ဖက်နဲ့ အနောက်ဖက် ကင်မရာတွေက Dual Camera တစ်စုံစီပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Portrait Mode လို့ လူသိများတဲ့ HUAWEI ရဲ့ Bokeh Mode လို့ခေါ်တဲ့ Wide Aperture Effects ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Wide Aperture Effects ဆိုတာက ပုံမှန် Portrait ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေလိုမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာကို Focus ဖြတ်ပြီး နောက်ခံ Background ကို လိုအပ်သလို ဝေဝါးနိုင်တဲ့ Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Wide Aperture Effects ဟာ သာမန်လူပုံကိုပဲ Portrait ရိုက်တာတင်မကပဲ အရာဝတ္ထုတွေကိုပါ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ရင်ဖန်တီးနိုင်သလောက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Camera Mode တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ကျိန်းသေစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Pro Photo Mode နဲ့ရိုက်ပြီး RAW ဓါတ်ပုံတွေကို ပြန် Edit လုပ်ပါ
HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းဟာ Mid Range စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပေမယ့် ကင်မရာပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေက High End Smartphone တစ်ခုနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချက်ကို သိနိုင်တာကတော့ HUAWEI nova 2i မှာ ပါဝင်တဲ့ Pro Photo Mode ဖြစ်ပြီးတော့ HUAWEI ရဲ့ အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ HUAWEI P10 လိုဖုန်းမျိုးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်နေရသလိုမျိုး Manual Control တွေဖြစ်တဲ့ Shutter Speed, ISO, Focus တို့ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Pro Photo Mode မှာနောက်ထပ် Feature အနေနဲ့ RAW Format ကို Mid Range ဖုန်းဖြစ်ပေမယ့်လည်း Support ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး RAW Format ကို Support လုပ်တာက နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဓါတ်ပုံကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးသောဓါတ်ပုံဖြစ်တဲ့အထိ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတော့ SnapSeed, Adobe Photoshop Express နဲ့ Adobe Lightroom Application တွေကိုပဲ Recommend ပြုလုပ်ပါရစေ။
ကိုယ်ရိုက်မယ့်ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ကင်မရာ Mode တွေကို အသုံးပြုပါ
HUAWEI nova 2i ရဲ့ ကင်မရာ Feature တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန် Mid Range ဖုန်းတွေမှာပါဝင်နေကြ Features တွေထက် အများအပြားပါဝင်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် HUAWEI nova 2i စမတ်ဖုန်းမှာ Camera Mode တွေကို မျိုးစုံထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးသော ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးချင်တယ်ဆိုရင် အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Camera Mode တွေကို ရွေးချယ်ပြီး ရိုက်ကူးမှသာ အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် ညဘက်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် Night Shot Mode နဲ့ ရိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး ညဘက်မှာ ကားမီးရောင်တွေကို ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ Light Painting Mode နဲ့ ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီလိုမျိုး Light Painting Mode နဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကားမီးတွေကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် Car Light Trails ၊Light Graffiti ၊ Silky Water ၊ Star Track စသဖြင့် ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ပုံပေါ်မှုတည်ပြီး ရွေးချယ်လို့ရမှာပါ၊ တစ်ခုရှိတာကတော့ Light Painting mode နဲ့ ရိုက်ကူးပြီဆိုရင် Tripod ပေါ်မှာ ဖုန်းကိုတင်ပြီးရိုက်ကူးမှသာ အကောင်းဆုံးရုပ်ထွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ HDR Mode နဲ့ Filter တွေကိုလည်း လိုအပ်သလိုအသုံးပြုမှသာ အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးလို့ရမှာပါ။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံအလန်းတွေရှိရင်လည်း ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါဦး။
MyStyle Myanmar2018-12-20T21:23:54+06:30January 1st, 2018|Ad, Lifestyle|